Deg deg:Dahir calasow oo sir badan shaaciyay kadib xarigii Kaadheri. - xog baahiye
Dahir calasow ayaa bartiisa facebook kaga falceliyay qoraal codsi ah oo uu bartiisa facebook soo geliyay fannaanka caanka ah ee Ilkacase. Waxa uu falcelintiisa ku shaaciyay in Somaliland ay ka qoomamayn doonto xadhigii ay u geysteen hobolka caanka ah ee Maxamed Kaadheri.
arrintan ayaa timid, kadib markii maalin nimadii talaadada xadhig loogu geystay magaalada Hargeysa Maxamed Kaadheri oo doonayay in uu show ku qabsado halkaasi.Waxaa xadhiga fannaanka ka hadlay fannaaniin kala duwan waxaana ay si naxariis leh u dalbadeen in fannaanka xuriyaddiisa dib loogu soo celiyo isla markaana laga sii daayo xabsiga.
Xog hoose oo aan helnay ayaannu ku ogaannay, in Dahir Calasow uu si qarsoodi ah ula xiriiray xukuumadda Somaliland balse ugu dambeyntii uu ku guul darreystay.
fashilka awgiis,Dahir ayaa xukuumadda Somaliland ugu hanjabay in uu faafin doono sirahooda hadii ay sida ugu dhaqsiyaha badan u sii deyn fannaanka.
Arrintan ayaa cabsi badan abuurtay waxeyna dhalisay hadalhayn aad u badan taasi oo keentay in xukuumadda Somaliland ay sida ugu dhaqsaha badan u maxkamadeyso Fannaanka.
AKHRISO: Fashil:Hodan Cabdiraxman oo qeylo afka furatay kadib cod sir ah oo loo soo diray.